Worms WMD inobvumira kuyambuka-chikuva multiplayer neayo yazvino chigamba | Linux Vakapindwa muropa
Worms WMD inobvumira kuyambuka-chikuva multiplayer neayo yazvino chigamba
Makonye WMD, Imwe yezvinyorwa zvemutambo wevhidhiyo wengano yemakonye eguerrilla izvozvi ine chigamba chekupedzisira chiripo icho mushure mekuchivandudza nacho ichi chinobvumira vatambi vemo maitiro pakati pemapuratifomu akasiyana. Naizvozvo, ikozvino vatambi vanogona kutamba mune ino online modhi vachipesana nevatambi vanobva pasirese pasirese uye zvisinei nekuti vane vhezheni yeWindows, yeMac kana yeLinux. Pasina kupokana hunhu hunozokosheswa nevazhinji vevatambi veiyi zita avo kusvika parizvino vasingakwanise kutamba nevashandisi kana shamwari dzaive ne OS isiri yavo.
Uye zvakare, chigamba chinobatanidza zvakare kumwe kugadzirisa, uye kwete iyi chete. Izvo zvinoitika ndezvekuti ndiyo inonyanya kurova uye ndiyo iri kudarika zvakanyanya. Asi kana isu tikatarisa iwo ruzivo rwechigamba, isu zvakare tinotenda kuti zvimwe zvigadziriso zvinosanganisirwa mune yemitambo yekutsvaga rondedzero, yepasirose chat inowanikwa pakati pevashandisi vemapuratifomu akasiyana zvakare, uye vashandisi veLinux vanozovewo nesarudzo dzekuburitsa kugadzirisa kana kubvisa mamwe matambudziko e vamwe vashandisi vaive nemavara.
Uye kunezve zvimwe zvakagadziridzwa zvinosanganisirwa muchikamu ichi chaunogona kutonakidzwa nacho. Muchokwadi, vashandisi veLinux neMac ndivo vangangobatsirwe zvikuru nechigamba ichi, nekuti ndiwo mapuratifomu ane vashoma vashandisi uye nekudaro zvaive zvakaoma kuwana vashori maitiro evazhinji pane dzimwe nguva pakanga pasina munhu airidza. Zvino kubvumira munhu wese nemunhu wese zvichazonyanya kuve nyore kuwana vatambi kutenderera pasirese kuti vataure naye.
Kune avo vasingazive mutambo we Worms, Ndinofungidzira kuti pachave nevashoma vasingazvizive, kuti utaure kuti mutambo unokurudzirwa zvikuru. Kunyangwe ichitaridzika, iyo isiri chinhu kunze kwemepu ine makonye anourayana achishandisa zvombo zvakasiyana, iri muropa uye pasina mubvunzo inokupa nguva yakanaka, kunyanya kana uchitamba uchipesana neshamwari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Worms WMD inobvumira kuyambuka-chikuva multiplayer neayo yazvino chigamba
Idzi inhau dzakanaka. Izvi ndozvazvinofanira kugara zvichiitika, kuti hapana zvipingaidzo pakutamba papuratifomu iwe yaunoda.
Zvino isu tichafanirwa kunyengetedza shamwari kuti dzibate mutambo uye dzitipe mabhomba.